Vavolombelon’​i Jehovah any Azia
MPONINA 4 464 374 770
MPITORY 728 989
FAMPIANARANA ­BAIBOLY 771 272
Be dia be no nianatra nefa iray no nitoriana
Niandry dokotera tany amin’ny hopitaly i Jonathan, any Philippines. Nahita azy niakanjo tsara i Laila, ilay vehivavy niasa teo amin’ny fandraisana olona, dia nanontany raha mpiasan’ny orinasa momba ny fiantohana izy. Nilaza i Jonathan hoe Vavolombelon’i Jehovah izy, ary tonga hanampy Vavolombelona iray marary. Gaga i Laila, dia niteny hoe tena tia namaky Tilikambo Fiambenana ny dadany, ary vao maty vao haingana. Novakin’i Jonathan taminy ny Jaona 5:28, 29 ary nomeny an’ilay taratasy mivalona hoe Manantena Inona ny Olon-tiana Nodimandry? izy.
Philippines: Jonathan, mitory amin’ilay vehivavy eo amin’ny fandraisana olona
Nitondrany boky sy gazety hafa i Laila tatỳ aoriana, ary nisy anabavy nasainy nampianatra Baiboly azy. Lasa nianatra koa ny vadiny sy ny rahavaviny ary ny mamany. Miara-mipetraka mantsy ry zareo.
Nanontany an’i Laila i Rose, mpiray tanàna aminy, hoe fa maninona no be vahiny foana izy. Nilaza i Laila hoe mianatra Baiboly amin’ny Vavolombelon’i Jehovah izy. Lasa nianatra koa àry i Rose. Faly erỳ izy nitantara ny zavatra nianarany, rehefa nitsidika an’i Abigail zandriny vavy. Nahaliana an’i Abigail ilay izy, dia nangataka hianatra koa izy. Lasa nianatra koa ny maman-dry zareo tatỳ aoriana.
Natao batisa i Laila tamin’ny fivoriamben’ny vondrom-paritra vao haingana. Efa vita batisa koa izao ny mamany, ary mbola mianatra Baiboly ny sasany amin’ny fianakaviany. Tamin’ny herintaona kosa no natao batisa i Rose sy ny rahavaviny, ary efa mivory foana ny mamany. Olona iray nitoriana tany amin’ny hopitaly no nahatonga an’izany rehetra izany.
Mampiasa teknolojia mba hahita marenina
Mandroso be ny fitoriana amin’ny marenina any Sri ­Lanka. Tsy ampy 80 ny adiresina marenina nananan’ireo Vavolombelona tany tamin’ny 2015, ary taratasy kely be dia be no nitehirizana an’ilay izy. Lasa misy fiangonana mampiasa tenin’ny tanana anefa any izao. Manana anarana sy adiresina marenina 420 eo ho eo izy ireo, ary efa voangona ao anaty ordinatera izany. Nosoratana ao koa ny tarehimarika ilaina ho an’izay hampiasa fitaovana manondro lalana (GPS) rehefa hitsidika azy ireo. Tokotokony ho 80 isan-jaton’ireo marenina ireo no efa niresahan’ireo rahalahy. Ny sasany tena nihaona tamin’izy ireo, fa nisy koa nandefasany hafatra an-telefaonina, na nifampiresaka mivantana tamin’izy ireo tamin’ny alalan’ny Internet. Hoy ny mpivady misionera iray: “Azo omena faritany hitoriana izao ny mpitory marenina. Izay marenina fantany ihany mantsy taloha no notsidihiny.”
Fisaorana avy amin’ny manam-pahefana
Mazoto manao fampirantiana any an-tanàn-dehibe ireo rahalahy any Mongolia, na dia rehefa 30 degre ambanin’ny zero aza ny hatsiaka. Tena niaiky an-dry zareo ny manam-pahefana iray. Naka boky teo amin’ny fampirantiana izy, dia nanoratra taratasy fisaorana. Hoy izy: “Bodista aho, nefa be dia be ny fivavahana efa nalehako. Tsy lalana iray ihany mantsy, araka ny hevitro, no tokony harahina, fa tokony mba handramana koa ny lalana hafa. Namaky maromaro tamin’ireo boky zarainareo aho, dia nanapa-kevitra hanoratra. Mahafoy fotoana sy hery be dia be ianareo mba hamoahana fanazavana azo arahina tsara sy mahasoa. Nianarako tao amin’izy ireny, ohatra, hoe tena ilaina ny mamaky Baiboly. Marina ny voalaza ao sady manampy eo amin’ny fiainana. Misaotra an’izay miezaka mandika an’ireny boky ireny amin’ny teny mongol aho. Isaorako koa izay mizara azy ireny amin’ny olona, na mingaingaina ny andro na mangatsiaka be.”
Mongolia: Fitoriana eny amin’ny toerana be olona, amin’ny andro mangatsiaka
Nivaly ny vavaka nataony
Nitory tamin’ny ankizilahy iray i Brett, rahalahy mpisava lalana any Hong-Kong. Nomeny an’ilay taratasy mivalona hoe Inona no Tena Mahasambatra ny Fianakaviana? ilay ankizilahy. Nitomany izy rehefa nahita an’ilay izy. Notezaina tao amin’ny fahamarinana, hono, izy fa nitsoaka tao an-trano tamin’izy 16 taona. Nipetraka teny amoron’ny arabe izy nandritra ny dimy taona ary lasa mpifoka rongony. Nisy fikambanana mpanao asa soa nahita azy, dia nanampy azy.
Nilaza koa izy fa talohan’ny nihaonany tamin’i Brett tamin’io maraina io, dia nivavaka izy hoe: “Raha ilay fivavahako tamin’izaho mbola kely no marina, dia omeo famantarana aho androany.” Nino izy hoe nivaly ilay vavaka. Nankao amin’ny mpivarotra kafe teo akaiky teo izy sy Brett, dia niara-nandinika an’ilay bokikely hoe Miverena Amin’i Jehovah. Tsy maintsy nody tany Frantsa anefa izy ny harivan’io, dia nifanome adiresy izy sy Brett. Nanoratra tamin’i Brett izy hoe: “Ry rahalahy malala, namaly ny vavaka nataoko i Jehovah. Ho any amin’ny efitrano akaiky indrindra eto aho amin’ny alahady.” Nitady Vavolombelon’i Jehovah izy, ary nanomboka nianatra Baiboly sy nivory.